Hevitra MPANOHARIANA | Septambra 2009 |
IDEAS RESISTING AGAINST THE STREAM
Pin's, bokotra ary insigne
2009-09-30 @ 11:14 in Andavanandro
Tany ampita andrefan'ny manodidina an'Alaotra iny ny tena, noho ny raharaham-pianakaviana, nanomboka ny zoma 25 septambra ka hatramin'ny alatsinainy 28 septambra koa aza tsiny indrindra raha heverinao ho elaela aho no tsy namaham-bolongana. Toa hafa ihany no nahazoana ny fandehan'ny raharaha tao amin'ny Firenena Mikambana (Misy lahatsoratra Global Voices teny anglisy nadikako ho teny malagasy rahateo ato) nandritra ny tontolon'ny Alakamisy sy ny Zoma tany lavitra tany.
Nanontany vaovao tamin'ny olona taty Antananarivo ny tena ny alin'ny Sabotsy, nanontany ny fandehan'ny raharaha, ary dia nitombina ny ahiahiko fa tsy hisy fivoriana vanona izany ao Mahamasina ao, fa mbola fandrika navelatra ihany iny. Natatatatako ho fanodikodinana ny sain'ny olona tsy hieritreritra izay hivory ao Ankorondrano Magro ireny toe-javatra ireny, sady izany rahateo no eritreritry ny nanatrika magro tamin'ny alakamisy nilaza ny tsy tokony ivoahana ny toerana intsony nihorakora-panoherana izany handeha toeran-kafa izany ny andro Sabotsy (Efa fisarahan-kevitra aloha izany!). Azo heverina ho nanaiky tsy sazoka fotsiny ny mpanatrika rehefa nanizingizina ny mpitarika fa efa ampelatanana ny taratasy fanekena hanaovana ilay fivoriana.
Nitantara ihany koa ilay olona nanontaniana fa henjana tokoa izao tenin'ny solontenan'i Kôngô tao amin'ny Firenena Mikambana izao nilaza ny solontena malagasy ho "sans qualité". Noheveriko fa tamin'ny alakamisy ihany no nisy tantara, hay hafa mihitsy ny tantaran'ny andro zoma ka tsy azoko ny resaka raha tsy tonga teto Antananarivo mihitsy aho. Ho tahaka ny ahoana re izany ny fahazoan'ny sarambambe Malagasy any ambanivohitra rehetra any raha izaho izay mpanaraka tsy tapaka ny vaovao aza no niala kely fotsiny dia very tanteraka?
Izay no ela fa hitodika any amin'ny lohatenin'ny lahatsoratra aho. Tohin'ilay fanentanana nataoko tamin'ny herinandroihany izy ity. Fomba iray hanehoana ampahibemaso sy an-dalambe ary any amin'ny birao sy ny toerana rehetra misy ahy ny fanoherako ny fanonganam-panjakana misy eto Madagasikara. Namakafaka hatrany izay tokony hatao ny tena hany ka nahita ity hevitra manaraka ity. Nanomboka ny talata 29-09-2009 aho dia mitondra pin's kely hatrany mipetaka amin'ny ankavian'ny akanjoko. Tsy maninona ilay pin's na maneho inona na maneho inona fa ny ao an'eritreritro raha mitondra io amin'ny toerana rehetra aho dia "manambara sy maneho amin'ny rehetra aho fa manohitra ny fanonganam- panjakana misy eto Madagasikara ary manohitra ihany koa ny herisetra amin'ny lafiny rehetra". Hevitro ahy manokana izay, koa raha resy lahatra ianao dia manaova toa ahy ihany koa. Rehefa pin's na insigne tsy voatery miresaka politika io fa mety no pin's an'ny orinasanao aza no atao amin'ny ankavian'ny akanjonao dia entinao maneho amin'ny manodidina anao io fa manohitra ny fanonganam-panjakana ianao ary miray fo amin'ireo izay mitolona isan'andro saingy mamita ny adidinao eo amin'ny fiainana an-davanandro.
Raha mbola mahamenatra anao kosa ny fanaovana io dia tsy hitako intsony izay azo atao ho anao fa aleo mitsotra hoe efa mety amiko ny toe-draharaha amin'izao fotoana izao. Rehefa tsy manana pin's na insigne (toy ireny apetaka any ampiangonana ataon'ny sampana fitadiavam-bola ireny) dia ataovy bokotra tsotra izao zairina eo. Ampitampitao amin'ny namana sy ny mpitarika mihitsy aza izao hevitro izao fa tsy mahafantatra aloha aho hoe voarara an-dalambe ny fanaovana pin's e! Araho maso aho ary bedeso raha toa hitanao fa tsy mitondra pin's rehefa mifanena aminao.
jentilisa, 30 septambra 2009
P-S: 30 septambra 1895 : nitsangana ny saina fotsy teo Manjakamiadana. Resy ny tafika malagasy... koa hanangana ny saina fotsy ve ianao sa menatra ve ianao raha tsy mahasahy maneho ampahibemaso amin'ny fomba bitika dia bitika ny tsy fankasitrahanao ny fanonganam-panjakana?
Nampidirin'i jentilisa | 10 Hevitra | Trackback (0) | Permalink
Mandrahona ny ho eny Ambohitsorohitra amin'ny Zoma 25 sept 2009 ny mersenera
2009-09-23 @ 21:07 in Ankapobeny
Ela ny ela fa mipoitra tsikelikely ihany ny marina. Toa tsy misy miresaka loatra ho'aho ity hotantaraiko manaraka ity eto an-tserasera nefa dia gazety malagasy no nahitako azy fa ny gazety taratra laharana 1693 nivoaka tamin'ny 23 septambra 2009 ihany no ampelatanana. Namoaka io gazety io ao amin'ny pejy faharoa fa "Mandrahona ny hilahatra eo Ambohitsorohitra" ny rezervista tanora, nitolona tamin'ny andron'ny TGV. hidina an-dalambe izy ireo hitondra sora-baventy satria tsy tanteraka ny fampanantenana natao tamin'izy ireo, toy ny hanomezana asa ho azy ireo tahaka ny hoe fampidirana azy ho miaramila ary hotsinjovina manokana ny rezervista nanohana ny tolona.
Lasa ny saiko, fotoana taiza ho aiza tokoa nandritra ny tolona moa izy ireo izany no nandray anjara tamin'izany tolona izany? Ary inona avy no anjara andraikiny nandritra ny tolona nataony. Asa raha mba tsikaritrareo fa miampanga tena ry zareo ireto no sady miampanga ny TGV ihany koa. Sao dia misy mieritreritra fampitahana amin'ny zana-dambo 2002 ary aloha ka aleo avahana tsara.
Tamin'ny 2002, rehefa tsy nety niditra an-tsehatra loatra ny tena miaramila dia nisy ny fiantsoana olona ampahibemaso sy tamin'ny alalan'ny haino aman-jery ho an'izay hanao raharahana miaramila. Tao Ambohitsorohitra ireo olona ireo no nantsoina ka nofanina avy eo hampandry tany. Mazava tsara fa ampahibemaso no niantsoana ireo olona ireo. Noho izy ireo notarihin'ny Jeneraly Razafindralambo, tamin'izany fotoana izany no nahazoan'izy ireo ny anarana hoe Zana-dambo. Ny iraka nampanaovina ireo Zana-dambo ireo dia ny hanafaka ny tanàna na faritany manodidina tsy ho eo am-pelatanan'ny filoha Ratsiraka intsony. Nianatsimo ny iraka voalohany indrindra, dia nianavaratra andrefana ary niafara tany atsinanan'i Madagasikara.
Tamin'ity taona 2009 ity kosa aho tsy nandre na oviana na oviana fa mandray rezervista ny TGV, handray fiadiana na fitaovam-piadiana. Noho izany tsy mahalala ny andraikitr'izy ireo sy ny iraka ampanaovina azy ireo. Marihina indray mandeha fa nolazaina hoe Tanora ireo rezervista ireo. Mahatadidy tsara kosa indray anefa aho fa tena manana paik'ady ara-miaramila sy tena Vonona tokoa ny tariky ny TGV nandritra ireny tolona tamim-bato nataony rehetra, toy ny nanafihany ny 1RM1 tamin'ny 16 febroary 2009 sy ny 4 marsa 2009 nandravana ny fihetsiketsehana teo amin'ny kianjan'ny 13 mey. Tsy adinoina ny andro nanafahana ny mpianatry ny Lisea frantsay Ambatobe tratra takalon'aina tsy fidiny tao amin'ny sekoly nianarany. Tena ady no nataon'izy ireo tamin'izany fotoana izany fa tsy nisy basy hita avy amin-dry zareo kosa. Kanjo hay nisy fampanantenana ny hampanaovana azy ireo ho miaramila raikitra, na asa hafa ho azy ireo raha mandray anjara mavitrika amin'ny ibaikoana azy izy ireo.
Nahatadidy tsara kosa anefa aho, fony vao nahazo ny fahefana i Andry Rajoelina fa vao jerena ireo "miaramila" miandry ny lalana andalovany handehanany mody dia tsikaritra ho tsy tena miaramila mihitsy izy ireo, na dia mitana basy aza, ary tsy vitsy no efa antitra na lava volo nefa tsy manamboninahitra (inay anie nalaiko sary izy ireny). Ny tao an-tsaiko avy hatrany raha vao nahita azy ireo aho dia hoe :"miaramilan-dRamaroson (Alain) angaha ireny?" Manao fanamiana sy mitana basy soa amantsara ry zalahy ireo tamin'izany fotoana izany.
Koa raha tsy nisy ny fiantsoana ampahibemaso ny rezervista sy fanomezana fitaovam-piadiana mahery vaika azy ireo, moa diso ve aho raha milaza mazava hoe mersenera ireo mandrahona ho eny Ambohitsorohitra amin'ny Zoma 25 septambra 2009 ireto fa tsy izany lazain'ny gazety hoe rezerista izany? Fanarontsaronana ny marina tsy hivandravandra loatra ka hanafintohina ny maro ny mody iantsoana azy hoe rezervista.
jentilisa, 23 septambra 2009 amin'ny 23:10
PS: raha misy ny hametraka hevitra: soraty amin'ny vakiraoka (na blocnote na notepad na...) aloha ny hevitra tianao apetraka. Rehefa vita izany vao ankotrihinao ny takelaka (actualiser) dia fenoinao ny banga rehetra eo amin'ny fametrahan-kevitra. Ataoko fa tsy ho very ny hevitrao amin'izay fotoana izay.
Nampidirin'i jentilisa | 5 Hevitra | Trackback (0) | Permalink
Madagasikara: Hetsika lehibe amin'ny Asabotsy 3 oktobra 2009
2009-09-22 @ 10:46 in Politika
Antsoina ny Malagasy rehetra mpanara-dalàna sy mandà hatramin'ny farany ny fanonganam-panjakana eto Madagasikara sy manerantany hanomana ny fanehoan-keviny talaky masoandro amin'ny Sabotsy 3 oktobra 2009 ho avy izao indrindra indrindra. Ny fihaonana dia hanomboka amin'ny 11 ora atoandro ary hofaranana amin'ny 2 ora folakandro raha ela indrindra na mety ho fotoan-gasy aza ny fanombohan'ny fotoana. Entina amin'izany fotoana izany ny sainam-pirenena malagasy. Fotoam-pivavahana ho an'ny firenena no hanombohana ny fotoana, tsy atao betsaka ny kabary fa ny fanentanana isan-karazany no tena andravahana ny fotoana.
Ho an'ny eto Madagasikara manokana dia entanina avokoa ny isan-tanàna. Ny eto Antananarivo sy ny manodidina ary ireo izay manam-pahafahana ho tonga aty Antananarivo hanao ny fihaonana ao amin'ny Magro, na kianjan'ny ara-dalàna Ankorondrano. Entano ny namana sy ny tapaka rehetra fantatrao ho tonga amin'io fotoan-dehibe io satria iankinan'ny fiainam-pirenena mandrakariva ny fahatongavanao. Tsy hihoatra ny vala isika fa hanamafy kosa ny hampiharana satan'ny tetezamita notontosaina tany Maputo. Asehontsika fa tsy vondrona na antoko be tsy andraofana tsara hakana hevitra fa ny vahoaka malagasy iray manontolo.
Miala tsiny aho raha manao io lohateny sy io lahatsoratra io. Tsy fikambanana na ny hetsika mpanohana ny ara-dalàna na ny antoko ao aminy no miantso io hetsika io fa izaho izay manoratra. Ao anatin'ny teti-panorona isika koa dia manetsika vato aho hiasan'ny rehetra ao anatin'izao toe-draharaha politika eto Madagasikara izao ka na tokony ho soso-kevitra aza izy io dia lasa fanerena mihitsy. Amin'io fotoana lazaiko io no fotoana heveriko fa mety hisehoan'ny mpitarika rehetra izay voatery miafina miseho eo anatrehan'ny olona, ary tsy tokony hatahotra ny hosamborina indrindra indrindra. Raharinaivo Randrianatoandro irery ihany no nandray ny andraikiny (nifafa ny kihony) tamin'izay nataony na dia ny mpitarika legalista rehetra aza no voafandrika tamin'ny 11 septambra 2009 lasa teo. Anaovana ramatahora ny hosamborina hatrany ve dia nilefitra tokoa? Olana eo amin'ny ankolafy Ravalomanana ny tsy fananana olona sahy miatrika nefa tsy manao herisetra na mampirona ho amin'ny herisetra. Hitako ihany ny mpitarika sasantsasany tamin'iny 11 septambra 2009 iny, teo anoloan'ny kianjan'ny 13 mey teo, be hevitra amin'ny hoe "tokony hanao tahaka izao na tahaka itsy" ireo andian-jatovo teo anoloan'ny Hotel Glacier, nefa tsy olonao akory ireo ary efa feno mpitsikilo mpampirisika manodidina anao. Ny tena mpitarika dia eo alohan'ny rehetra, mahafehy ny miara-dia aminy ary mahasahy manohitra sy misambotra ihany koa ireo mpitoratoraka sy mpanakorontana fa tsy manao tazandavitra fotsiny. Ataovy ho ohatra indray eto i Malcom X.
Eo ankilany ihany koa ny fandambolamboana avy amin'ny ankolafy hafa tsy hanao fihetsiketsehana intsony mandra-pahatongan'ny 6 oktobra hiheverana ny momba an'i Madagasikara hotontosaina eto Antananarivo, hanaporofoana eo amin'ny vahiny mandalo amin'io fotoana io fa efa manaiky ny FAT, na nilefitra eo anatrehan'ny FAT avokoa ny vahoaka rehetra. Mbola hanaiky hofitahina fanindroany amin'ny fitaritan'ny hafa indray ve? Sa rehefa tsy manohy ny hetsika ampahibemaso intsony mandra-pahatongan'io 6 oktobra io dia deraina hoe "hendry"? Fa rehefa tsy hanao na inona na inona kosa aloha amin'io fotoana io dia efa filavoana lefona ankitsirano tsotra izao izany. Tsy aleo ve isika miala nenina amin'ny fanaovana fihetsiketsehana amim-pilaminana mba hisorohana ny fihetsika famoizam-po izay mety hitranga amin'ny olona?
Mandra-pahatongan'izany fotoana izany kosa indray dia entanina ny be sy ny maro hifehy tapa-damba manga tanora ( lokondanitra atoandro), na hisalotra akanjo manga rehefa miantsena, handeha hianatra, handeha hiasa, hitsangantsangana na ho aiza na ho aiza ho mari-mpifankafantarana sy ho fanehoana fa manohitra ny jadona sy ny fanaovana herisetra isika. Raisiko etoana ny soso-kevitr'i Pov amin'ny hanaovana izay mari-pamantarana izay. Raha misy ny manana soso-kevitra tsara amin'ity zavatra iray ity dia raisina an-tanandroa izany. Manomboka ny alatsinainy 28 septambra kosa indray no anaovana ity mari-pamantarana ity. Ilazao ihany koa ny namana sy ny sakaiza rehetra. Soso-kevitra avokoa izay rehetra nosoratako izay fa anjaran'ny tsirairay indray no mieritreritra sy mifampidinika.
jentilisa, Antananarivo 22 septambra 2009 amin'ny 12: 50 atoandro
Nampidirin'i jentilisa | Hametraka hevitra | Trackback (0) | Permalink
2009-09-21 @ 04:51 in Toekarena
Lalao malagasy mampiasa saina ny fanorona, satria mampiasa saina dia misy tetika ao anatiny mba handresena ny mpifanandrina amin'ny tena ao anatin'ny lalao. Nanoratra ny teny hoe diabolika indray aho rehefa tsy hitako izay ilazana azy amin'ny teny malagasy fohy na voambolana malagasy tokana. Amin'ny lalaontsaina Japoney sudoku, izay lalaontsaina mahafinaritra ahy indrindra amin'izao fotoana izao na dia tsy manam-potoana loatra ialana voly aza aho, dia misy dingana efatra : Misy ny lalao ho an'izay vao mianatra (mora), misy ny ho an'ny eo ho eo ihany (antonony), misy ny ho an'ny efa mahay (sarotra) ary misy ny antsoina hoe diabolika (feno fandrika). Ny lalao diabolika izany dia lalao tena sarotra dia sarotra tokoa, mody maneho endrika mora izany ilay izy kanjo tena feno fampisafidianana ka raha kamokamo maika hahavita dia eo ianao no raisina. Tahaka izany indrindra ny paipaika misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Miasa dia miasa ny teti-panorona diabolika hampandresena ny mitondra ankehitriny.
Diabolika satria rehefa mitodika eny amin'ny mpanohana ny FAT ny legalista dia ny "fozaorana" no tena eritreretiny bebe kokoa fa tsy ny mpibaiko ao ambadik'izy ireny. Toa minia mijery volonkoditra sy saranga, lazaina ho ambany na ivelan'ny seha-pihariana tsy mandoa ny hetra sy ny haba rehetra amin'ny fitondrana fa jamba kosa tsy mieritreritra fa misy ireo mpanankarena na olona tsongoinolombolo eo amin'ny fiaraha-monina mitango hatrany ny harem-pirenena.
Diabolika rehefa ny olona rehetra heverinao ho manana ny lanjany sy ny anjara toerany teto amin'ny firenena no mamerimberina mandrakariva fa tsy hita loatra ny heloky ny boaikely, na avelao aloha hitondra izay efa eo ahitana izay vitany, nefa ny lalana alehany aza mivarina mankany amin'ny hatsana fa tsy vitan'ny hoe misisika mankao amin'ny kizo. Olona nipetraka tsy tamin'ny alalan'ny safidim-bahoaka ve no avela hitondra, ary hita mivandravandra izao fa lasa manjaka dia manjaka tokoa ny andian-jiolahy?
Diabolika rehefa misy mampilalao ny fivondronan'ny "telo tonta" nitondra teo aloha ny mety tsy ho ao anatiny akory. Ohatra nivandravandra tamin'izany ny "hetsika lehibe" nodradradradraina ho tamin'ny 19 septambra 2009. Rehefa nitambatra ny telo tonta dia lasa ny ankolafy Zafy Albert avokoa no filoha isam-paritra. Ny maro amin'ny mpitarika legalista kosa anefa dia voatery niafina noho ny "raharaha 11 sy 12 septambra". Mampanontany tena ihany hoe tena mivondrona tokoa ve ny telo tonta na dia vonjimaika fotsiny aza? Tsy mahita olona manana ny antsoina hoe "charisme" rahateo aho ao amin'ny ankolafy legalista izay tena toavin'ny mpitolona. Efa nivelatra rahateo ny fandrika amin'izay hisian'ny andian-jatovo teo amin'ny vavahadin'ny magro hitoratoraka fiara mandalo raha nanao fivoriana tao Ankorondrano teo ny legalista.
Diabolika raha mbola misy ny minia fa tsy misy vondron'olona mahay stratejia goavana, mety karamaina na navondrona firenena goavana iray, ao ambadik'izao teti-panorona diabolika izao. Tsy manao na inona na inona fa mitazana kosa anefa ny firenena goavana hafa eo ankilan'izany. Na inona na inona filaza, tena midona any amin'ny sarambambe hatrany ilay hoe "lasa any New York i Andry Rajoelina". Misy fifandraisana diplaomatika goavana dia goavana miasa ao ambadika ao matoa tonga amin'izao sehatra izao ihany ry zareo. Aiza ho aiza kosa ny fivondronan'ny olona stratejy ankilany hilalao izao fanorona diabolika izao? Toa ny mandeha singatsingany no tena betsaka, nefa ny akanga maro tsy vakin'amboa!
Diabolika satria tsy maintsy ampiasaina ny faharetana "endurance", tsy maintsy ikipiana ny fahasahiranana ara-bola mihatra amin'ny isam-pianakaviana izay mahakivy ny maro tsy hanoratra loatra intsony amin'izao fotoana izao, raha tiana ny handresy na farafaharatsiny hifandanja amin-dry zareo eo amin'ity fanorona politika, mora mankaleo ny malagasy ity. Diabolika izay eritreritra milaza ho leo politika izay satria ho entin'ny olona amin'izay tiany anaovany anao foana ianao raha izay no ataonao. Mbola ho aiza, hoy i Kaina? Anjaran'ny tsirairay no manohy na mamakafaka.
jentilisa, 21 septambra 2009 amin'ny 06:53
Nampidirin'i jentilisa | 4 Hevitra | Trackback (0) | Permalink
Tsy henatra ny maka bahana!
2009-09-18 @ 10:02 in Politika
Efa tokony ho tamin'ny alatsinainy 14 septambra 2009 no efa niverina teny amin'ny kianjan'ny ara-dalàna avy hatrany ny mpanohana an-dRavalomanana rehefa hita fa sarotra ny idirana an'Ambohijatovo sy ny kianjan'ny 13 mey. Ninia aho ny nangina tamin'ny resaka tolona rehefa nolazaina avy hatrany fa hananika an'Ambohijatovo hiaraka amin'ny mpitarika sasantsasany ao amin'ny ankolafy Zafy Albert ny mpitarika ny tolona mahazatra eny amin'ny kianjan'Ankorondrano.
Hitantsika fa tsy fantatra be ihany izay tena marina amin'ny hoe "hiaraka hankeny Ambohijatovo ny telo tonta" tamin'iny andron'ny zoma 11 septambra iny. Natokitoky olona befahantany ny mpitarika ary dia noheveriko fa voafandrika raha tsy nisy ny teti-panorona mazava. Nametraka ny tenako ho mpitati-baovao tsotra aho ary niniako natao ho lohateny mibedy ankolaka ny mpitolona hamerenana ny ara-dalàna ny lohateny hoe "izao izany no atao hoe manao action?" Efa tsapako ihany manko fa fandrika natao tamin'ny legalista ihany ilay fanaitairana ho eny Ambohijatovo nefa ny fanomanana stratejika hiatrika ny zava-drehetra ho amin'izany fidinana an-dalambe izany tsy mbola vonona akory. Efa teo ampanoratana tskelikely ireny mihitsy aho no nisy ireny toe-javatra tamin'ny faran'ny herinandro ireny, mbola tsy tena fotoanany tamin'iny araka ny fijeriko. Mba misy fotoanany avokoa manko ny tetika rehetra.
Na misy aza ny esoeson'ny sasany, ny mampiavaka ny tolona ankehitriny dia ny fitandroana hatrany ny soatoavin'ny baiboly. Tsy hain'ny mpanao politika ny manetry tena fa hain'ny mpandala ny ara-dalàna izany raha ny tokony ho izy. Noho izany, ny fiverenana mankeny amin'ny kianjan'ny ara-dalàna tsy fihemorana velively fa fakana bahana handrosoany amin'ny tolona araka ny tokony ho izy. Deraina manokana Atoa Fetison Rakoto Andrianirina tamin'ny nandraisany fanapahan-kevitra hametraka iny fanarambaran'ny ankolafy Marc Ravalomanana iny. Mbola tsy mipetraka tsara ny fiangaviako mba ho amin'ny 12 ora sy sasany farafahatarany no hanombohan'ny fotoana saingy efa zava-dehibe amiko ny fitodiana eo amin'ny kianja fanoherana ny herisetra amin'ny lafiny rehetra.
Ny fanohizana ny tolona rehetra dia tsy maintsy miankina be dia be amin'ny fifampiarovan'ny mpitolona sy ny fahasahiana mitory ny mpanakorontana hampadio ny tolona. Toa lesoka ihany manko ny fiatahana fotsiny ireny olona ireny fa tsy ny mahasahy manandrina azy ireny, koa tsy mahagaga raha raisin'ny sasany bambaray ny mpitolona sy ny mpanakorontana. Nahita ny toe-javatra nitranga tamin'ny faran'ny herinandro ireny aho ka mba mahita ihany ny fandehan'ny raharaha tamin'ireny fotoana ireny.
Tsy miteny hoe vaovao an-tselika aho fa vaovao ankelika no soratako ary dia raiso tsara araka izany ny tiako soratana. Nisy ny nampita ity vaovao ity ka ampitaiko etoana fandrao mba misy ihany ny ilàna azy. Vaovao fampitandremana ilay izy, ka mampita fotsiny aho eto na dia somary avadiko amin'ny fomba fanoratro aza ilay izy indraindray hanakonana ny mpanome ny vaovao:
Tsy nahomby aloha ny famelomana ny adim-poko teto Madagasikara ary dia tetika hafa indray no naroson'ny Frantsay. Akorontany amin'ny fomba hafa indray ny firenena amin'ny fanasamatsamahana ny firenena tahaka ny any Afghanistan (Sy Somalia araka ny filazan'ny "Filohan'ny tetezamita vaovao" Monja Roindefo). Ny anton'izany dia ny hitavanana manontolo tsy amin'ahiahy ny harenan'ny firenena. Ny tetika hanaovana azy kosa dia ny hampiroboroboana ny fanaovana heloka bevava, toy ny miaramila mitam-piadiana mahasahy mitifitra sy mamono avy hatrany. Ny fitaovam- piadiana ampiasaina dia izay efa naondran'ny Mafiosi Okrainiana eto Madagasikara. Nisy aza fitaovam-piadiana vita Isiraeliana mahatody lavitra sady mahatingina tsara izay kendrena (Laser) novidian'ny Frantsay, ka rehefa narahan'ny Mossad (sampam-pitsikilovana Isiraeliana) ny toerana nandehanany dia teto Madagasikara no niafarany fa tsy fantatra kosa ny antoko-tafika hampiasa azy ireo. Ary farany (sady fototry ny hafatra) nampitandrina ny mpanome ny vaovao an-kelika taty amiko fa misy koa ny tetika hitifirana ireo mpitarika ny fampanajana ny fifanarahana tany Maputo (ny ankolafy telo). Ny tena nahasosotra ny Frantsay moa dia ny fitoriana napetraky ny ankolafy Ravalomanana tany amin'ny Firenena Mikambana momba ireo nosy manodidina an'i Madagasikara izay bodoiny hatramin'izao fotoana izao. Hatreo ny mesazy.
Farany, ampahatsiahivo ahy ny fivondronam-ben'ny mpanendaka etsy Ambodifilao fa tena maro dia maro tokoa ry zareo. Mbola misy dia haleha indray ny tena. Manontany ihany aloha aho hoe: "Tsy maintsy handehanana ve ny hidina eny an-dalambe ny sabotsy 19 septambra 2009 raha tsy ampy ny fiomanana.
jentilisa, Antananarivo 18 septambra 2009, amin'ny 12:04
Nampidirin'i jentilisa | 2 Hevitra | Trackback (0) | Permalink
Efa niongana i Andry Rajoelina
2009-09-16 @ 09:31 in Politika
Ary ny namany sady ny praiminisitrany ihany no nanongana azy, no tohin'ny lohateny izay omeko anareo. Fomba fijery ny toe-java-misy amin'izao fotoana izao ity nosoratako ity. Izay mpamaky ny bolongako dia mety ho nahatadidy ny nosoratako tamin'ny faran'ny volana janoary 2009 nanao lohateny manontany hoe: "TGV sy EMMO NAT: Tontosa ve ny fanonganam-panjakana?" Tontosa tokoa ilay fanonganam-panjakana roa volana latsaka taty aoriana. Ankehitriny kosa aho tsy hametraka intsony ilay lohateny manontany fa tsoa-kevitra avy amin'izay taratra ankehitriny no nampisongadina ny lohateny avy eo.
Voalohany, raha nanao fanambarana i Andry Rajoelina ny amin'ny hananganan'ny "Praiminisitra" Monja Roindefo ny governemantan'ny fampihavanam-pirenena, dia tsy naheno na oviana na oviana aho tamin'io fotoana io fa hotendreny ho "Praiminisitra" aloha i Monja Roindefo. Tao an-tsaiko avy hatrany ny toy ny nataon'ny filoha Ravalomanana tamin'ny 17 mars 2009 izay niadian-kevitra tamin'ny hoe fialana na tsy fialana iny fanambarany iny, ny hita fotsiny aloha amin'izao fotoana izao dia efa tsy filoham-pirenena intsony i Marc Ravalomanana. Dia mifanahatahaka amin'izay indrindra ny fanambaran'i Andry Rajoelina tamin'ny takarivan'ny 28 aogositra 2009. Mahazo miverina mihaino ny fanambarana nataony isika rehetra hanamarina na handiso izany filazako izany. Namerimberina fotsiny izy hoe "Praiminisitra Monja Roindefo" fa tsy naheno aho hoe "hotendreko ho praiminisitra indray".
Faharoa, rehefa nisy indray ny fanambarana ireo ho ao anatin'ny "governemantany" dia nisy "fihoaram-pefy" nataon'ny "Praminisitra" Monja Roindefo: ny fanendreny ny filoha lefitry ny tetezamita sy ny filohan'ny filankevitry ny tetezamita. Ny ankamaroan'ny olona dia nihevitra fa fahadisoana eo amin'ny fombafombam-pandaharana eo amin'ny fitondrana iny nataon'ny "Praiminisitra" Monja Roindefo iny. Izaho kosa dia nahatsapa fa matoa ninia nanao ireo fanambarana ireo i Monja Roindefo dia efa nihevitra sahady izy tany anatiny tany fa efa izy izao no "ambonin'ny filoha lefitry ny tetezamita". Tsy mandehandeha foana ireny fihetsika isan-karazany ireny.
Fahatelo, rehefa nanao fanasana fanintelony indray ny Pr Zafy Albert tamin'ny 10 septambra 2009 dia nanaiky ny hihaonan'ny efa-tonta i Andry Rajoelina, ary izy Andry Rajoelina mihitsy no nametraka ny fotoana sy ny toerana hoe ny alahady 13 septambra 2009 amin'ny folo ora maraina eo amin'ny Lapan'ny fitaratra Anosikely. Tsy nanaiky io fihaonana io anefa ny "Praiminisitra" Monja Roindefo ka nanambara fa tsy hanatrika io fihaonana io ry zareo. Ny siosio an-tserasera no namakiana fa nalefa tany Nosy Be i Andry Rajoelina "hiala sasatra" fa ny tena antony dia ny hanakanana azy tsy hanatrika ilay fotoana. Taratasy no nampandrenesana indray ny tsy hahatongavany. Tsy fantatra izay faneriterena nahazo azy ka nanaovany indray taratasy tsy fahafahana manatrika ny fotoana teny Anosikely. Azo Ambara manomboka hatreo fa mandray an-tanana mivantana ny raharaham-pirenena ny "Praiminisitra" Monja Roindefo.
Miandry isika hoe rahoviana no hiteny i Andry Rajoelina ary inona no hoteneniny. Ny zava-misy ankehitriny, toy ny fitsenan'ny CEMGAM ny Jeneraly Rasolomahandry sy ny fifampiandrasan'ny RFI sy ny FIS dia fanomanan-tsaina ny mpanohana ny ankolafy Andry Rajoelina sy ny mpanohana azy avokoa fa "hiova" ny fitantanana ny firenena. Ka ahoana ary hoy ianao, tsy efa niongana ve i Andry Rajoelina?
jentilisa, 16 septambra 2009 amin'ny 11:34 atoandro
Nampidirin'i jentilisa | 3 Hevitra | Trackback (0) | Permalink
4*4 may: inona no tena marina?[nampiana]
2009-09-14 @ 21:58 in Ankapobeny
Mifangaroharo be ihany ny hevitra mikasika ity tranga tamin'ny alatsinainy 14 septambra ity. Indreo ny sary, anjarantsika ny maminavina. Ahoana no nahamay ity fiara vaovao ity? Misy ny milaza fa fanafihan-jatovo no nisy ka nandoro ny fiara rehefa nanaparitaka ny olona nivorivory ny mpitandro ny filaminana. Ireo izay nanatri-maso rehetra niresaka tamiko kosa, sy niresaka tamin'ny mpanao gazetin'ny matv dia nanitrikitrika fa avy amin'ny baomba mpandatsa-dranomason'ny miaramila no niteraka ny afo.
Ny zavatra hita aloha dia nijanona tampoka ny fanaparitahana ny olona. Nilaza ny fisian'ny fiara may ny TVM saingy tsy nilaza izay nanao azy sy ny antony nahamay ny fiara. Nanohy nifandrangitra ireo ankolafy saingy tsy niditra tamin'ny fikasihan-tanana. Ny nahagaga ihany koa dia ireo polisy tsy nanao fanamiana maro nihaodihaody sy niara-dalana. Hamaly faty tamin'ny fanafihan'ny FIS natao azy sa inona no tena dikany?
jentilisa, 15 septambra 2009
izao izany no atao hoe manao action?
2009-09-13 @ 07:26 in Politika
tsy hanao be resaka aho fa ireo ny lahatsary sy ny sary hilaza azy aloha. Be mihitsy ny tiana holazaina fa hizara fotsiny aloha.
fidinana avy eny Ambohijatovo nataon'ny sasany io
Mbola mitohy ny famoahana ny sary an!
ny sary roa farany dia maneho ireo miaramila nandrava barazy tetsy anoloan'Antanimena magro io
mety hataoko tsikelikely eo ihany angamba ny fitantarana an-tsoratra izay niainana fa mbola tery dia tery ny fotoana. Marihina fa ireo sary sy lahatsary rehetra ireo dia an'i Jentilisa Madiorano avokoa.
Inona aloha no atao raha hampandroso ny tolona?
2009-09-10 @ 09:32 in Politika
Dia asa aloha na mifanandrify amin'ny kivazivazy mampihomehy nosoratan'ny namana Dotmg atsy ambadika atsy izy ity fa dia toy ny manome tolotra jôgôlens maimai-poana ho an'izay liana i Jentilisa ho fandraisany anjara amin'ny tolona efa nandraisany anjara tamin'ity taona ity. Koa raha maimai-poana ilay izy, tsy fantatra kosa ny kalitaony fa anjaranareo no mitsara azy.
Nampitandrina aho ny tsy idirana na oviana na oviana amin'izay mety hitarika herisetra, na ny fanaovana herisetra satria fantatra ny tsy fahatomombanan'ny fifandaminana ao amin'ny tolona hamerenana ny ara-dalàna. Efa nisy ihany ny fifampiahiahiana ka nampikatso ihany ny fandrosoan'ny tolona. Efa saiky niitatra tany amin'ny faritra ny hetsika nialoha indrindra ny fifanarahan'i Maputo voalohany fa tapaka tampoka rehefa nifanarahana ny tsy hanaovana ny hetsiky intsony. Fotoana amin'izay angamba izao hanoroan-dalana ny manam-panahy ao amin'ny tolona hamerenana ny ara-dalàna (izay efa lasa ny fampanajana ny Satan'ny Maputo indray amin'izao fotoana izao).
Dingana voalohany no lazaiko etoana, raha mahatadidy tsara ny mpitolona rehetra indrindra izay zatra ny fanombohany teny Ambohijatovo tamin'ny faran'ny volana marsa dia amin'ny atoandro fotoana firavan'ny mpiasa sy iandrasana indray ny fidirana folakandro no nampafana ny fotoana teny. Nazoto nankeny ny mpiasa manodidina iny toeram-piasana iny ka tsy nahagaga raha vetivety monja dia nangoro-potsy ny toerana. Tsy mahagaga loatra raha nanomboka hidina teny amin'ny kianjan'ny 13 mey ny mpitolona tamin'ny roa ora latsaka fahefany teo ho eo.
Ankehitriny inona no mitranga? Raha mankeny Ankorondrano amin'izao fotoana izao, ny ora aloha indrindra hitako teny hanaovana ny hiram-pirenena sy ny hiram-pitolomana dia amin'ny iray ora sy sasany folakandro, izany hoe efa andalana hiditra hiasa indray ny mpiasa... indrindra fa ny mpiasa tsy miankina amin'ny fanjakana. Inona no vokatr'izany? Mialoha ny hieritreretana hankanesana eny dia efa mieritreritra izay mbola handeha hiasa hoe mba hahita zavatra sy hahara-baovao eny ve aho sa hiveri-maina lasa mody alohan'ny fanombohana ofisialy?
Inona izany ny tiako ambara? Miangavy re atombohy amin'ny 12 ora sy sasany farafahatarany ny fotoana, izany hoe ny fihirana ny Tanindrazanay Malala sy ny Madagasikara Tanindrazanay, fa tsy maintsy ho henon'ny mpiasa izany ary hihazakazaka hankeny indray ny maromaro kokoa dia ho hitanareo indray ny zavatra hafa azo atao. Miangavy mba ho ora roa raha lava indrindra no faharetan'ny fotoana ka tsy hifandrombahana ny fitenenana mba te-ho hitan'ny maro fa mahalala izay mpankeny hatrany izay mpankeny. Raha tontosa io fanombohan'ny fotoana amin'ny atoandro io fa tsy folakandro intsony dia hisy ihany ny fifampitarihan'ny samy mpiara-miasa vao mety hahomby ny dingana manaraka. Aleo tsorina aminareo fa ny hany sisa hankanesako eny Ankorondrano amin'izao fotoana izao dia efa angatahana andro tsy iasana ao am-piasana mihitsy ary tsorina fa ny mankeny no manasatra kokoa noho ny miasa... izany hoe tena tolona no atao e!
Izay kely dia kely izay nefa mety hampiova zavatra maro dia maro eo amin'ny fandroson'ny tolona no atolotro ho an'ny mpitarika sy izay manana fifandraisana amin'ny mpitarika eny amin'ny kianjan'ny ara-dalàna. Lazaiko fa be dia be ny fitarainana amin'ny fahataran'ny fotoana io nefa mba te-handray anjara ihany ry zareo. Ny tolona tsy hoe mifarana amin'ny fankanesana eny amin'ny Magro fa eny aza no fanaovana ny dingana voalohany. Asa! mbola tsy mety ve izany soso-kevitra kely dia kely izay?
jentilisa, alakamisy 10 septambra 2009 amin'ny 11:35
Pitik'afo kely monja dia mirefotra i Madagasikara iray manontolo
2009-09-08 @ 08:55 in Ankapobeny
Tsy misy maharesy ny TGV sy ny mpanohana azy ao amin'ny ankolafy Rajoelina eo raha gidragidra no tadiavina ary voafandrika ny hafa raha miditra amin'izany. Tsy misangisangy velively aho raha manoratra izany. Toa iniana adinoina indray ireo andro nanjombona nandritra ny tolona hamerenana ny ara-dalàna hatramin'izay. Raha nanantena ny fahamaroan'olona be indrindra ny tao amin'ny Magro Ankorondrano Antananarivo tamin'ny 26 jona 2009 dia ny nifanohitra tamin'izany no nitranga. Inona no antony? nanao izay hisian'ny fikorontanana eo amin'ny mpitolona ny FAT tamin'ny nisamborana mpitarika vitsivitsy ary dia nahomby tokoa tamin'izany tetika izany. Koa inona indray no mbola ijabahana amin'izany?
Izaho manokana dia miaro hatramin'ny farany ny fandalàna ny tsy fanaovana herisetra ary manohitra tanteraka ny fandranitana ho amin'ny herisetra. Tetika efa vita lamina ny tamin'ny 26 jona 2009 araka ny efa notantaraiko tao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe "Ny tetika famonoana ny tolon'ny ara-dalàna -fizarana faharoa-" nivoaka tamin'ny 5 jolay 2009 lasa teo. Raha fehezina dia hoe mitady izay hisian'ny gidraka hatrany ireo mpanakorontana ahafahana mamono ny tolona. Afenina ao ambadiky ny antsoina hoe "Action" hatrany io fitadiavana gidraka io nefa efa voaomana hatrany paika atao hahavery anjavony ny fenitra rehefa mandeha amin'izay lalana izay. Izaho manokana dia mahamarika andian'olona hatrany isaky ny misedra zava-tsarotra ny mpitolona ao saingy nangina hatrany fandrao lazaina ho miampanga befahatany (ankoatra izay efa nasehoko sary).
Ankehitriny indray dia misovoka any anatin'ny mpanatrika any indray ireo mpampirisika ny "Action" izay herisetra no tena kendreny. Tsarovy fa tsy niomana amin'izany herisetra izany ny maro amin'ny mpitolona, ary hihemotra indray ny tsy tia gidragidra raha miditra amin'izay sehatra izay ny ao amin'ny Magro. Hatramin'izao aloha dia isaorana ny mpitarika tsy nanaiky befahatany ny sosokevitr'ireo olona mahay miresaka ireo nefa tsy ho tonga akory fa matahotra ny ipitihan'ny rà raha sanatria misy tokoa ny tahaka izany. Efa kolontsaina nanabeazana ny mpitolona amin'ny alalan'ny fivavahana hatrany ny fandavana herisetra, noho izany teti-pandravana haingana ny tolona ny fiheverana hanao action, eny fa na dia ny fivoahana ny vavahadin'ny Magro fotsiny ihany aza. Tompon'andraikitra amin'ny rà latsaka sy ny ratra izay miditra amin'izany amin'izao fotoana ary avelao handeha hanao ny azy any ireo mihevitra hitarika ho amin'izany.
Hampitodika ny maro amin'ny zava-nisy tao anatin'ny folo andro izay tsy dia voaresaka loatra aho nefa midika zavatra lehibe amin'izay mety hitranga atsy ho atsy. Tamin'ny faran'ny volana aogositra dia nisy gidragidra mahatsiravina tao amin'ny kianja Malacam Antanimena filalaovana baolina lavalava. Nisy manko ekipa sy mpilalao tsy nahatanty resy ka nitarika ady tao. Tamin'io andro io ihany teny Anosipatrana, nisy saofera fiarakaretsaka voadaroka satria voaendrikendrika ho nitondra baomba... rehefa resaka baomba dia fantatra hoe ankolafy inona no tena notaitairina tamin'izany hisian'ny fankahalana tanteraka tao aminy. Dia tamin'ny faran'ny herinandro teo indray nisy angaredona tany Moramanga nandritra ny fiadiana ho tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny baolina fandaka. Tsy nahatanty resy tsinona ny tompontany ka nanao ankamely, tsy nahazaka intsony ny vahiny dia namaly kanjo dia nivadika ho ady saritaka izany.
Tsotra ny anton'ireo gidragidra isan-karazany ireo, voalohany ny lonilony mipetraka any amin'ny olona any ka eo no anehoany ny sorisoriny. Manomboka amin'ny fandrisihana aloha izy ireo hampibolisatra ny raharaha, ka raha sanatria mibolisatra tokoa dia na mitsoaka avy hatrany na midaroka kely koa aloha dia mandositra avy eo sady mihomehy na mitsiky ihany avy eo... manala azy... manala ny sorisory tsinona! Efa misy rahateo ny mpampirisika saingy tsy hiditra ao akory rehefa avy eo fa faly mahita fikorontanana fotsiny. Tadidiko tsara ny nataon'ny haino aman-jery tamin'ny 28 marsa 2009, fa ny vali-bontana nataon'ny avy eny Ambohijatovo ihany no nasongadiny fa ny nataon'ireo niandohan'ny toraka tsy hitanao akory. Efa ao anaty teti-panorona ihany koa izany fomba fampitam-baovao izany hiampangana ny mpanara-dalàna ho nitarika ny gidragidra. Olona efa nokaramaina ho amin'izany gidragidra izany, sy efa zatra ady tahaka ny nitranga tamin'ny 16 febroary 2009 tamin'ny nanafihana ny toby miaramila 1RM1 Analakely ve no ifaninananao sady efa zatra hetsika mifandraika amin'ny herisetra ao anatin'ny fiainana andavanandro? Ny anao anefa raha vao misy miaramila sahisahy anao dia ny mitomany migogogogo sy mandohalika eo anatrehany no mba vitanao.
Raha misy anefa ny lonilony, tsy any amin'ny fidarohana na famonoana ny olona tsy mitovy hevitra avy aminao velively no vahaolana fa fanampin'olana aza izany. Fa aiza moa amin'izao fotoana izao no ironan'ny maro an'isa kokoa no hitady herisetra, izay antony lehibe indrindra nampihena ny tolon'ny 13 mey tamin'ny tolon'ny laoranjy indray ho harahinao? Averiko indray, tsy haharesy ny ankolafy Andry Rajoelina velively ianareo raha gidragidra no tadiavinareo sady tsy voatery ho ireo metyhifanandrina aminao velively no tompon'andraikitra voalohany amin'ny toe-java-misy ankehitriny. Ninia aho namoaka ity lahatsoratra ity mialoha ny ivoahan'ny FAT faharoa izay mety hiteraka fahasorenana sy fahatezerana hafa eo amin'ny mpamaky. Fa dia saino tsara ho'aho izay tokony hatao fa aza entin'ny fo fotsiny. Enimbolana ve vita ihany ka dia...
jentilisa, talata 8 septembra 2009 mialoha kely ny 11:00 atoandro
Lahatsary [video] 2 ny tolona ataon'ny legalista mavitrika hatrany.
2009-09-05 @ 17:01 in Politika
Raha nijery indray ireo lahatsary teo aloha aho dia nampitaha ny fahavitrihan'ny olona tany amin'ny faraparan'ny volana marsa 2009 mbola teny Ambohijatovo sy ny amin'izao fotoana fotoana anoratana volana septambra izao. Hita avy amin'izany fa tsy nihena mihitsy ny fahamaroan'ny olona nanatrika izany tolona mamerenana ny ara-dalàna izany. Efa ambolana anefa no lasa. Raha nosainina indray ny an'ny TGV dia nihena am-pitoerana toa fen'antitra ny azy ireo nandritra ny roa volana nitolomany, izay tsy nahomby raha tsy niditra an-tsehatra tamin'ny fanonganam-panjakana ny andia-miaramila.
Tamin'ny 2 septambra 2009 teo aza moa ny azy ireo rehefa nantsoina ho ao amin'ny lapan'Ambohitsorohitra izy ireo dia nisy ilay filazan'i Constant Raveloson hoe notambatambazana tamin'ny limonady grenadine sy bonbon anglais. Izaho kosa nahita ireo lovia fanary feno nanerana ny ahitra sy ny mbola ifandrombahan'ny sasany izay latsaka teny amin'ny bozaka... mandrangorango fatratra ireny. Ny tsikaritra amin'ny an'ny roa tonta ve? Ny teny Ambohitsorohitra feno fakofako ny toerana nialana rehetra. Tsy fantatra intsony na nisy toeram-panariam-pako vonjimaika teny na dia efa fahazaran-dratsy ny azy ireo. Ny eny Ankorondrano kosa mahamenatra dia mahamenatra izany hanary fako eny rehetra eny izany. Tsarovy ihany koa fa ny eny Ankorondrano tsy hoe izay toerana sisintsisiny miafina rehetra dia lemana avokoa rehefa poritra fa misy ny toerana voatokana ho amin'izany ary manaja izany ny mpitolona rehetra eny. Tena samy manana ny azy e!
Dia ireo aloha ny sary tamin'ny alakamisy 3 septambra fandrao lazainao fa maao lazamasaka fotsiny ny mpanoratra. Mbola mianatra ny fanaovana azy ity moa ny tena ka ialana tsiny indrindra ny mety ho tsy fahatombombanan'ny sary omena anao.
jentilisa, Antananarivo 06 septambra 2009 amin'ny 00:30 maraina.
Tetezamita: Ny foloalindahy malagasy ihany no vahaolana tsotra indrindra!
2009-09-02 @ 10:41 in Politika
Eto amin'ny kihon-dalan'ny tantaram-pirenena malagasy indray isika ankehitriny. Miandry avokoa izay avoaky ny anio sy ny ampitso isika. Maro no tsy te-hieritreritra afa-tsy ny hoe fiarahan'ny ankolafy efatra fantatra ankehitriny no fomba tsotra indrindra hamahana ny olana mamatotra amin'izao fotoana izao. Izaho kosa mahita fa ny foloalindahy malagasy irery ihany no mahavaha ity olana amin'izao fotoana izao raha mahita ny toe-java-misy ho olana ry zareo. Toa noadinoina tanteraka manko ny fifanarahan'i Maputo voalohany, ary misy dia misy ny fifandroritan-kevitra momba ny miaramila ao anatin'io dina io. Efa nampahatsiahiviko tany amin'ny bolongana hafa tany ihany (fijery io) tamin'ny fotoana nivoahan'io dina voalohany io fa angamba tsara ihany ny nametrahana ny tafika ho ankolafy manokana nanasonia ny fifanarahana.
Na inona na inona fomba filaza dia ny tafika no nanongana an-dRavalomanana saingy ny hafetseny, raha izay no filaza azy, dia ny nametrahany sivily ho mpitantana voalohan'ny fitondrana norombahiny. Eo imason'ny olo-tsotra dia ireo sivily mitantana amin'izao fotoana izao ireo no tena mifehy ny firenena, saingy ny fanambarana isan-karazany navoakan'ny vondrona mitam-piadiana eto Madagasikara no maneho fa ry zareo foloalindahy no tena mibaiko amin'izao fotoana izao.
Ny voalohany, fony vao nivoaka ny Dinan'i Maputo, tsy nankasitrahany ny fanaratsarahana ny tafika amin'ny fanendrena tokony ataon'ny ankolafy efatra ao anatin'ny komity misahana ny tafika. Ny hevitra avy amin'izany manko dia hoe tsy tokony hibaiko ny miaramila velively ny sivily. Ny noadinoiny dia mpiasam-panjakana mitam-piadiana ry zareo fa tsy mpanjaka hovelomin'ny mpandoa hetra eto amin'ny firenena. Hevitra anatin'ny olona, indrindra fa ny tantsaha, ny hoe ry zareo no fanjakana satria ry zareo no solontenam-panjakana hita mivantana, ary mahafinaritra azy ireo ery ny mandre ny fiantson'ny olona azy ireo ho "sefo". Tsy mahagaga noho izany raha mandeha ho azy ao an-tsainy ny fitiavana haka kely avy amin'ny asany izay efa anakaramana azy ihany. Ny zandary moa no tena ivantanan'ny resaka amin'ny ankapobeny amin'io sehatra io.
Ny fanambarana farany indray dia ilay hita ombieny ombieny nataon'ny Ombimanga nivoaka avy tamin'ny Akademia Miaramila Antsirabe. Fanambarana midi-droa saingy ny adihevitra natao no manamarika fa, raha amin'izao fotoana izao, dia tsy maintsy tsy tontosa ny iray amin'iray amin'ny zavatra lazainy. Voalohany, fampitandremana ny mpanao politika tsy hanonona ny foloalindahy ka mety hisaraka fisaraham-bazana. Mampahatsiahy tampoka ny iray amin'ny teny folo manao hoe: "Aza manonontonona foana ny anaran'YHWH Andriamanitrao, fa tsy ataon'YHWH ho afa-maina amin'izany tsy akory ianao!" Ndry! toa lasa andriamanitra tampoka ry tonaka sa te-ho andriamanitra? Fanambarana mampivoitra ny maha-tsy refesi-mandidy, tsy azo kitikitihina. Tsara ny fampiraisana ny tafika amin'ny ankapobeny fa moa ve tokony hotazonina hatrany izany fampiraisana izany raha misy ny lò ao anatiny ary tafiditra any amin'ny fitarihana ny tafika aza ny sasany? Hatraiza ny andraikitra rehefa misy ny miseho ho "sefo"?
Dia mifampitohy amin'izany sy mamaly ny ahiahy indrindra ny tohin'ny fanambarana nataon'ny Ombimanga. Manery ny tompon'andraikitra ambony anivon'ny tafika tsy hiandany na amin'iza na iza ho amin'ny fivoahana amin'izao krizy politika izao. Tsorina fa tsara izany filazana manaraka izany saingy misy ilay indrokely. Fanambarana nisesisesy nivoaka anivon'ny tafika ihany ny filazana handraisana fepetra raha vao sarahina tsy ho eo amin'ny fitantanana i Andry Nirina Rajoelina sy i Monja Roindefo Zafitsimivalo. Mba rere ihany fa niandry izay vokatry ny fifanarahana tany Maputo II ry zareo ka raha vao tafasaraka ireo olona ireo dia nisy Directoire Militaire tampoka teto amin'ny tanàna, saingy tsy nisy moa ny vokatra dia foana ho azy ny fikasana. Tsy mazava be ihany aloha hatramin'izao ny lazaina fa fandraisana fepetra rehefa tsy misy ny vahaolana ataon'ny ankolafy. Fijeriko anefa dia ny saribakoliny ihany ny iray amin'ireo ankolafy resahina. Tsy misy na inona na inona azo atao amin'ny saribakoly fa ny mpanetsiketsika azy no tokony itodihana.
Fehiny: tsy ny ankolafy efatra fantatra no hahavaha io olana io fa arakaraky ny ataon'ny Miaramila irery ihany. Amiko, tsy ny ankolafy Andry Rajoelina loatra no tokony ifampiraharahana fa ny miaramila mivantana, izany hoe ireo mpitarika sy mpitondra azy ireo amin'izao fotoana izao. Moa tsy tsaroanareo ve tamin'ny nanonganana ny Jeneraly Mamy, minisitry ny foloalindahy farany tamin'ny andron'ny filoha Ravalomanana, ny filazana nataon'ny tao amin'ny Capsat fa tsy maintsy misy fankatoavana avy amin'izy ireo vao tafapetraka no minisitra ny minisitry ny foloalindahy? Aoka tsy ho hadinoina ny tantara. Hita fa miandry anjara hanina goavana amin'ny tetibola ry zareo, tahaka ny tamin'ny Repoblika faharoa ihany. Noho izany, na ifampiraharahana ry zareo na heverina ny momba sy ny hanaovana azy ireo. Hevitro izay!
jentilisa, 02 septambra 2009 amin'ny 12:45 atoandro.
1 2 3 Manaraka»
Vasoky ny tambajotra sosialy tahaka ny Facebook,Twitter sy ny karazany ny blaogy amin'izao fotoana. Mora miely vetivety ny hevitra sy izay voasoratra amin'ireo sehatra ireo.
Misy lafiny iray anefa tsy ahavoazan'izy ireo mihitsy ny blaogy dia ny fitehirizana.Rehefa karohina ny vontoaty iray dia sarotra hita kokoa ny vokatry ny fitadiavana avy amin'ireo tambajotra sosialy ireo.Izay lafiny izay no tsy maharesy tondromaso ny blaogy satria mora hita kokoa ny vontoatiny rehefa karohina amin'ny alalan'ny mili-pitadiavana.
Momba ny eto manokana indray, tsy hianona intsony amin'ny vaovao eto an-toerana aho fa hisokatra kokoa amin'ny manerantany, na amin'ny sehatra ankapobeny. Hosoratana avokoa na eritreritra sendra nandalo na revin-gadra, na fanehoan-kevitra mety hanafintohina ny mpamaky. Mety ho tezitra ianao amin'izay voasoratra nefa ny hisokafan'ny saina handinika sy hamakafaka ary handanjalanja no tena kinasa ambadiky ny lahatsoratra. Ka mazotoa daholo ary ny hevitra anie no hiady fa tsy isika no hifandramatra!
Taombaovao Merina, Taombaovao Iraisana
Alahamady sy taombaovao fahagasy
Bryan! Dylan! Samia olom-banona!
Ny fanalan-jaza : aza mba tratranâ€™ny fihatsaram-belatsihy sy voafitaky ny henatra
LalÃ na nolanian'iza? Nampiana fanitsiana avy amin'ny MSK
Gazety Teny Malagasy
Misia... (Ahy sy ny Ankafiziko)
Araho amin'ny twitter i Jentilisa
Rohin'ny bolongana malagasy maro
jentilisa @ globalvoices teny malagasy
A la pointe de mon crayon (POV)
Gazety Avy Lavitra
Atolotry ny Blaogy.com sy ny serasera.org